Gịnị bụ NBA Player Props? - osisi site - jluis37.com
N’izu a, anyị tinyere nnukwu isi na akwụkwọ egwuregwu anyị. NBA player props na-ugbu that a na-adị ndụ na njikere na-wagered na. Amaghị otu otu ị ga-ewere na NBA playoffs? Ọfọn, ọsụsọ ọsụsọ.
Player props tinye that a pụrụ iche akụkụn’etiti egwuregwu ịgba chaa chaa t dream egwuregwu. Na NBA player throws, nanị họrọ a participant na ị chọrọ ilekwasị anya. Websiten’ebe ahụ, họta ọnụọgụ akọwapụtara nke ọma nke ọma.
Anyị na-enye isi ihe niile, ngụkọta ngụkọta na enyemaka niile ma ọ bụrụ d e ịchọrọ ime ka ọ dị mfe. Chee Kawhi Leonard nwetara akara 27.5 na egwuregwu # 1? Werezie ihe karịrị 27.5 ma nwee ọerụ oge ọ bụla Leonard gụrụ nkata! Chọrọ inwe ntakịrị mgbagwoju anya ma lekwasị anya na onye ọkpụkpọ gị na-anwa ịnweta okpukpu abụọ? Mgbe ahụ lee Ihe + Na-enyere Aka, Na-enyere Aka + Mgbapụta ma ọ bụ njikọta ndị ọzọ anyị na-enye.
Chee Ben Simmons ga-enwe egwuregwu ọjọọ na-ejikwa bọọlụ ahụ? Ọfọn, mgbe ahụ gaba ka ndị turnovers na nzọ ya!
Ihe na-eme ka anyị dị iche na Stake gbasara Player Props bụ na anyị ga-ahapụ gị ka ịhazie nsogbu ọ masịrị gị. Ka anyị gwuo ntakịrị ma lelee nkwado Kawhi Leonard maka egwuregwu # 1 megide Utah Jazz. Ndabere akara prop bụ N’ime / N’okpuru 27.5 isi. Ebe i nwere ike dina 1.87 maka ihe karịrị ma ọ bụ 1.77 maka n’okpuru.
Nwee mmetụta na ọ ga-enweta akara 37? ) Kama iwere 1.87 na ihe karịrị 27.5, gbanye ihe mmịfe ahụ gaa na 36.5 adorable lee mmụba na nsogbu! Ugbu a ị na-enweta 9.02 karịrị, nke ga-akwụ 9x nzọ gị!
Kama nke ahụ, ọ bụrụ n’ịchọrọ igwu egwu ya, anyị na-ekwekwa nke ahụ. Mịga mmanya na ụzọ ọzọ ma ị ga – ma enweta ihe karịrị /n’okpuru 19.5 maka Kawhi Leonard. Ihe karịrị na-akwụ ụgwọ 1.02 ma na-egbochi mmerụ ahụ kwesịrị ịdị oke nchekwa!
Site na ihe ọkpụkpọ ọkpụkpọ na Stake, ị nwere ike gbanye mgbọrọgwụ maka onye ọkpụkpọ iji nwee egwuregwu dị mma ma ọ bụ nke ọjọọ ma zie ya!
Gba nzọ na ihe ọkpụkpọ ọkpụkpọ bụ ụzọ na-atọ ụtọ iji lelee egwuregwu NBA. Ndị that a bụ aro ole na ole anyị nwere mgbe anyị na-achọ nkwado. Izizi, tupu iwere nkwado ọ bụla, ị ga-atụlerịrị ihe atọ na-esonụ. Mmerụ ahụ, igwu egwu oge na ihe ojoo bụ ihe kachasị mkpa mgbe ị na-egwu egwuregwu ọkpụkpọ.
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ gị banyere egwuregwu ahụ miniature merụọ ahụ, ọ dị nwute na ihe karịrị gị ga-anwụ na mmiri. Ọzọkwa, ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ gị na-enwe nnukwu egwuregwu mana egwuregwu ahụ na-agba agba, ikekwe ị ga-amalite iti mkpu na telivishọn gị mgbe onye nchịkwa dọtara ya na nkeji iri na anọ dum.
Abụọ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ na nkeji mbụ nke egwuregwu ahụ? Ọfọn, ị maara onye ọkpụkpọ gị ga-anọ n’oche maka ezumike nke mbụ nke mbụ. Hụ onye ọkpụkpọ gị ka ọ nọ ọdụ t seat bụ mmetụta jọgburu onwe ya mgbe ị nwere ihe karịrị, mana mmetụta dị ebube mgbe ị na-egwun’okpuru.
Website t ndọkpụ NBA na-agbanye ọsọ, oge ụfọdụ ọ na-esiri ike ịzọ egwuregwu ọ bụla. Ọtụtụ egwuregwu na-esi ike nkwarụ, yabụ tinye isi na ngalaba Player Prop ma nwee anụrị ebe ahụ! Nwere ọkọ na onye ọkpụkpọ na-abịakarị n’isi mmerụ ahụ? Họrọ ọkpụkpọ t even nzọ ya unders!
Dịka ọmụmaatụ, Anthony Davis na egwuregwu 6 bụ ihe atụ zuru oke. Ọ na-egwu naanị 5 nkeji nke bụ nnukwu nzọ maka ndị nọ n’ụdị ọ bụla. Chee na Giannis Anteokounmpo na-aga ịda website t ndapụ ya na Game 3?
Were kwekọrọ ekwekọ ma gbanye mgbọrọgwụ maka ya! Na ọtụtụ nhọrọ, anyị kpuchie gị n’ụzọ ọ bụla ị chọrọ Wager mgbe ọ na-abịa Player Props na NBA!